Xubnaha Koongarasku Mareykunu waxay heleen warbixin sir ah oo ku saabsan Iran – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Xubnaha Koongarasku Mareykunu waxay heleen warbixin sir ah oo ku saabsan ...
Xubnaha Koongarasku Mareykunu waxay heleen warbixin sir ah oo ku saabsan Iran
Beegsonews- Xubnaha Koongarasku waxay heleen warbixin sir ah Arbacadii oo ku saabsan ku lug lahaanshaha Iran weeraradii lagu qaaday xarumaha saliida ee Sucuudiga oo lagu eedeeyay maamulka Donald Trump, wargayska The Hill ayaa weriyay.
Mudanayaasha ayaa sheegay in warbixin kooban ay siinayeen Pentagon iyo saraakiisha sirdoonka Mareykanka.
Qoraalkaas ka dib, Sen. Lindsey Graham, oo ah saaxiibka dhow ee Madaxweyne Trump, wuxuu ku baaqay jawaab militari si uu u gaarsiiyo farriinta saxda ah ee Iran, isaga oo intaa ku daray inuu rumeysan yahay in madaxweyne Trump “uu sugayay waxa dhici doona si uu isbahaysi u sameeyo.”
Graham wuxuu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in laga hortago militariga, isagoo yiri: “Waxaan hadda ka go’aan badan yahay sidii markasta Iran loo joojin lahaa militeri ahaan. Waa inay bixiyaan qiime ay dareemayaan. Xayiraadaha weligood ma sameyn doonaan shaqada – waana inaan ka fikirnaa jawaabta militariga. Taas oo Iiraaniyiintu shaki ka qabaan qiimaha ay ku bixin doonaan jahwareerka adduunka, ”ayuu yidhi, isaga oo tixraacaya burburka ku yimid dhaqaalaha adduunka.
Senator-ka Jamhuuriga Mitt Romney, ka dib warbixintii qarsoodiga ahayd kadib, wuxuu yiri “Xaqiiqdii waxaan taageersanahay xaqa Sucuudiga si ay u qabtaan waxa ay u arkaan danahooda. Dalkooda waa la soo weerarey.” Waxaan doorbidi lahaa militarigeenna inuusan si toos ah uga qeyb qaadan jawaabta militariga. “
Isniintii, Ingiriiska, Jarmalka iyo Faransiiska, xulafada Mareykanka, waxay ku biireen eedeeynta Iran iyo ku lug lahaanshaha weerarkii Sacuudiga, hadal rasmi ah ayaa lagu yiri “ma jiro sharraxaad kale oo macquul ah.”
Warmurtiyeed ay si wada jir ah u soo saareen, ayaa lagu sheegay in saddexda dal, oo wali ka tirsan heshiiska nukliyeerka ee Iran ay la galeen Iran, oo Mareykanku ka baxay, ay yiraahdeen “waxaa la gaadhay xilligii ay Iran aqbali lahayd wada-xaajoodka qaab-dhismeedka muddada dheer ee barnaamijkeeda nukliyeerka iyo sidoo kale arrimaha la xiriira amniga gobolka, oo ay ka mid yihiin Taasi waa barnaamijka gantaal iyo arrimo kale. ”
Dhiniciisa, maamulka Trump wuxuu u tixraacay bayaankan inuu calaamad u yahay in reer Yurub ay ku sii dhowaanayaan mowqifka maamulka Trump ee ku aadan ku-meel-gaarka heshiiska nukliyeerka. Waxaa ka badan heshiiskii hore. ”
Maamulka Trump ilaa iyo hadda wuxuu ka fal celiyay weeraradii Iiraan isagoo cunaqabateyn saaray Bangiga dhexe ee Iiraan wuxuuna ogolaaday in ciidamo badan oo Mareykan ah iyo qalab difaaca gantaalaha Sacuudiga laga qaado.
Next articleMadaxweynaha El Salvador oo sawir iskaga hor qaadey Qaramada midoobey kahor inta uusan kahadlin
Madaxweynaha Yemen Abd Rabbu Mansour Hadi wuxuu ku baaqayaa feejignaan dheeri...